kabarmakyay: February 2014
February 24, 2014 at 2:52pm
သုတေသနဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်မှလုပ်တတ်ကြရဲ့လား ... (Can we do research?)
Think about it, 16 February, 2014
တစ်နေ့ ရုံးချုပ်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ မိတ်ဆွေညွှန်မှူးးက ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်။ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အီးမေးလ်နဲ့ မေးလာလို့ဗျာလို့ အစချီပြီး 'သူတို့က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သုတေသန ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်ကြပုံ မရဘူးလို့ ထင်တယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့် (အလှူရှင်တွေ ပိုက်ဆံထောက်ပံ့ချင်စိတ် ပေါ်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့) သုတေသန အဆိုပြုလွှာမျိုးကို မရေးနိုင်ကြဘူးတဲ့။ ကျောင်းတွေမှာ သင်မပေးကြဘူးလားလို့ မေးတယ်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ကျောင်းမှာ သင်ပေးလား။ ဘာတွေသင်လဲ' ဆိုပြီး မေးတော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော်က သင်ပါပြီ ကောဗျာလို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဘွဲ့ကြိုနောက်ဆုံးနှစ်မှာ တစ်ဘာသာအနေနဲ့ သင်ရသလို ဘွဲ့လွန်ကျမ်းတွေ ဆိုတာကလည်း သုတေသနကို အခြေပြုပြီးမှ ရေးကြရတာ မဟုတ်လားဗျာ။
အဲဒီအချိန်က ခပ်ပေါ့ပေါ့တွေးပြီး ပြန်ဖြေမိပေမယ့် နောက်တော့မှ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ 'ဒါကတော့ တို့ကို အထင်သေးတာပဲ' လို့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်မိတာများလား လို့ပေါ့ဗျာ။ ဒုတိယအတွေး ဆိုပါတော့။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နှိုင်းရကောင်းလားလို့ မထင်ကြပါနဲ့။ မာဘူဘာနီ၁ က 'အာရှသားတွေ စဉ်းစားတတ်ရဲ့လား'၂ လို့ သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးသလို ကျွန်တော်လည်း 'နေပါဦး ...သုတေသနဆိုတာကြီးကို ငါတို့ တကယ်ရော လုပ်မှ လုပ်တတ်ကြရဲ့လား' လို့ ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်မေးမိတယ်။ အဲဒီတော့မှ ပေါ်လာတဲ့ မေးခွန်းတွေကဗျာ။ မီးခိုး ကြွက်လျှောက် ဆုံးပဲ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ သင်ပေးရုံနဲ့ လက်တွေ့ လုပ်တတ်ပြီလို့ တထစ်ချ ယူဆလို့မှ မရပဲ။ သင်ပေးတဲ့ ဆရာကိုယ်တိုင်ကရော တကယ်တတ်ရဲ့လား။ စာသင်ခန်းကနေ အမြဲတမ်း ထွက်ပြေးဖို့ပဲ ကြံစည်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့၊ စာဆိုရင် အလွတ်ကျက်ဖို့လောက်ပဲ သိတဲ့ ဘွဲ့ကြိုစာသင်သား အများစုကတော့ သိမှာတတ်မှာ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ အင်မတန်တော်တဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ ကျောင်းသားတွေတောင် ခေတ်သစ် မျက်မမြင် ပုဏ္ဏားတွေလိုများ ဖြစ်နေကြမလား။ ပေးလိုက်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို ရမှ ရကြရဲ့လား။ ရတယ်ပဲ ထားပါဦး။ စာတွေ့ သိရုံလောက်နဲ့ အလုပ်မှ မဖြစ်သေးပဲ။ ဘွဲ့လွန် ကျမ်းတွေအတွက် လုပ်နေကြတာတွေကိုပဲ ကြည့်လေ။ သုတေသန ပီသလို့လား။ သင်ပေးတယ် ဆိုတာလောက်နဲ့ မပြီးသေးတာ သေချာတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ သင်ပေးတာတွေ အလုပ်မဖြစ်ဘူးပဲထား။ နိုင်ငံခြားမှာ စာသင်ဖူးတဲ့သူတွေ (မများဘူးဆိုတာတောင်) နည်းတော့မနည်းလှဘူး။ သူတို့တတွေကရော။ ထဲထဲဝင်ဝင် မသိဘူး ဆိုဦးတော့။ သုတေသနဆိုတာ ဘာဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ထုံးနည်းတွေလောက်တော့ သိကြမှာပဲ။ သူတို့ သုတေသန မလုပ်ကြဘူးလား။ နေပါဦး။ လုပ်ရော လုပ်ချင်ကြရဲ့လား။ လုပ်ချင်တယ်ပဲထား။ လုပ်လို့ရတဲ့နေရာ၊ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိလို့လား။ မလုပ်ချင် ကြဘူးဆိုရင်ကော။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေကို ရှာကြည့်တော့မှ၊ အလိုလေး ... 'သုတေသန လုပ်တတ်အောင် သင်မပေးကြဘူးလား' ဆိုတာက သမုဒ္ဒရာထဲ မြုပ်နေတဲ့ ရေခဲတောင်ကြီးရဲ့ ပေါ်နေတဲ့ ထိပ်ချွန်းပိုင်း သေးသေးကလေးပဲ ရှိသေးတာကိုး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း မာဘူဘာနီဖြေသလို ဖြေကြည့်ချင်လာပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သုတေသန မလုပ်တတ်ကြဘူး။ တစ်သက်လုံး မစူးမစမ်း၊ မမေးမမြန်း၊ မစောကျောမဝေဖန်ပဲ သိသလောက်ကလေးကိုပဲ အဟုတ်ကြီးထင်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ သုတေသန ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှင်သန်နိုင်မှာလဲ။ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကိုပဲ ကြည့်ပါဦး။ သင်သလောက်ကိုပဲ ကျက်၊ မှတ်။ စောဒကမတက်နဲ့။ မေးခွန်းမထုတ်နဲ့။ အားလုံး၏၊ သည်မရွေး ပြန်ရွတ်ပြ၊ ရေးပြနိုင်ရင် အမှတ်ပြည့်ရမယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လားဗျာ။ ကိုယ်တိုင် လေ့လာစူးစမ်းဖို့၊ ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ဖို့ ဆိုတာတွေကို အပိုအလုပ်လို့ မှတ်ယူကြတာကလား။ ဒီတော့ မေးခွန်းတွေ ထုတ်ရမယ်၊ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ အဖြေရှာရမယ်ဆိုတဲ့ သုတေသန အခြေခံ တွေက ပျောက်ဆုံးနေတော့တာပေါ့။ လက်တွေ့ သက်သေပြမယ်ဗျာ။ တစ်ဦးစ၊ နှစ်ဦးစကလွဲလို့ နိုင်ငံတကာမှာ နာမယ်ကျော်တဲ့ ရွှေပြည်သား သုတေသီရယ်လို့ များများစားစား ရှိလို့လား။ ပြည်ပမှာ လူရာဝင်တဲ့ စာတမ်းဆိုရင်လည်း အနည်းအကျဉ်းလောက်ပဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာပဲ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ သုတေသန ဌာနကြီးတွေမှာ လုပ်နေတာတွေက လက်တွေ့ဆီကို ရောက်လို့လား။ ဘယ်ဘာသာရပ် နယ်ပယ်ကိုပဲကြည့်ကြည့် သူ့ပရိသတ်နဲ့သူ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ထုတ်ဝေနေရတဲ့ သုတေသန ဂျာနယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်နှစောင်ရှိလို့လဲ။
၂။ အထင်သေးလှချည်လား ... လုပ်တတ်တာပေါ့ဗျ။
သုတေသန လို့ပြောလိုက်တိုင်း လူတွေက ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ၊ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ကရိယာတွေ၊ ဂျူတီကုတ်ဝတ်ထားတဲ့ လူတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ၀မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မေးခွန်းတွေ ထုတ်နေကြ၊ အဖြေတွေ ရှာနေကြ တာပါပဲဗျာ။ သုတေသန အလုပ်တွေ မတွင်ကျယ်သေးတာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ကို မလုပ်တတ်ဘူးလို့ ထင်နေတာက အထင်သေးလွန်းရာ ကျပါတယ်။ သုတေသန အခြေခံသဘောတရားတွေ ဆိုတာက နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲတဲ့ ပညာတွေမို့လို့လား။ သုတေသန ထုံးနည်းတွေဆိုတာက မလုပ်တတ်လောက်အောင် ရှုပ်ထွေးနေလို့လား။ နျူကလီးယားဗုံးတွေ၊ ဒုံးပျံကြီးတွေ မလုပ်တတ်ရင်နေမယ်။ လက်တွေ့အသုံးချ သုတေသန အလုပ်တွေကတော့ မလုပ်တတ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ သိတဲ့ တတ်တဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးပါဗျာ။ နိုင်ငံခြားပြန်တွေလည်း အများကြီး။ သူတို့ မလုပ်ချင်၊ မလုပ်နိုင်သေးတာပဲ ရှိတာပါ။ လုပ်ချင်လာအောင် အားပေး၊ လုပ်နိုင်လာအောင် ထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင် သုတေသန ဆိုတာကြီး ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ တွင်ကျယ်လာမှာပါ။ မသိသေး၊ မတတ်သေးဘူး ဆိုရင်လဲ သင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ရွှေပြည်သားတွေ ဒီလောက် မညံ့ပါဘူး။
၃။ အင်း ... လုပ်ချင်လည်း လုပ်တတ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အပေါ်ကအဖြေ နှစ်မျိုးလုံးကို ကျွန်တော် ဘ၀င်မကျဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ၊ သုတေသနဌာနတွေမှာ သုတေသနဆိုတာကို ကျကျနန မလုပ်နိုင်ကြတာကတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် သုတေသနကို နားလည်းမလည်၊ လုပ်လည်း မလုပ်တတ်တော့တဲ့ အခြေအနေအထိ ကျွန်တော်တို့ မရောက်သေးတာကလည်း အမှန်ပါပဲ။ မိတ်ဆွေညွှန်မှူးပြောတဲ့ နိုင်ငံခြားကအဖွဲ့ ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီး မေးနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ရိပ်မိ ပါတယ်။ 'မရှိတာထက် မသိတာခက်တယ်ကွ' ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ မတတ်ရင် သင်ပေးမယ် ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ ပိုက်ဆံကတော့ ကျွန်တော်တို့ကပဲ ပေးရမလား။ ကြားစပွန်ဆာကပဲ ပေးမှာလားတော့ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ လာသင်ပေးမယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူးလားဗျာလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ခက်နေတာက မသိတာ မဟုတ်ဘူး။ 'မသိတာထက် မလုပ်တာခက်' ဖြစ်နေတာဗျ။ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သင်တန်းတွေပေးတော့ မတက်ချင်ပဲ လာတက်ကြ။ ပြီးသွားတော့လည်း တတ်သလိုလို၊ မတတ်သလိုလိုနဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်။ ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်တွေကိုပဲ ဆက်လုပ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သံသရာ လည်လာခဲ့တာ ကြာလှပြီ မဟုတ်လား။
သိရုံ၊ တတ်ရုံနဲ့ မပြီးသေးပဲ တကယ်လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ လုပ်တတ်တဲ့သူတွေ တကယ်လုပ်ဖို့အတွက် လုပ်ရမယ့် နေရာတွေ (တက္ကသိုလ်တို့၊ သုတေသနဌာနတို့မှာ) ရောက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့ကို အဲဒီနေရာတွေဆီ ပို့ရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးပါ။ သူတို့မှာ လုပ်ချင်စိတ် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ချင်စိတ် ရှိလာဖို့အတွက် ဘ၀ဖူလုံဖို့နဲ့ အနာဂတ်မှာ မျှော်လင့်စရာတွေလည်း ရှိရပါမယ်။ အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့မှာ သိပ်ခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ညွှန်မှူးကို 'နိုင်ငံခြားက အဖွဲ့ကို မေးကြည့်စမ်းပါဗျာ။ သုတေသန မလုပ်ချင်တဲ့ သူတွေကို လုပ်တတ်အောင် သင်တန်းတွေ ပေးနေလို့တော့ ဘာမှမထူးဘူး။ လုပ်တတ်တဲ့သူတွေ သုတေသနမှ မလုပ်ရရင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်သွားအောင် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ ဆေးများရှိရင် ပေးပါဦးလို့။ ရှော့ရိုက်ပြီးပဲပြောင်းပြောင်း၊ သိပ္ပံဇတ်လမ်း တွေထဲမှာလို ဗီဇပြောင်းတာမျိုး၃ ပဲလုပ်လုပ် လုပ်ပေးပါလို့ ပြောဗျာ' လို့ ကျွန်တော် ရယ်စရာလုပ် ပြောမိပါသေးတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ မရယ်နိုင်ပါ။ အဲဒီလို တကယ်လုပ်မှ ရတော့မယ်ဆိုရင် အဲဒါ ... အတော့်ကို ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စဗျ။
1 Kishore Mahbubani, Dean, The Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapore.
2 Can Asians Think? (First published in 1998)
Bala Ji Moe and 77 others like this.
February 24 at 3:03pm · Like
Zay Htet တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာသုတေသနနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဝန်းကျင်ပျောက်နေတာပါ.. ခုတက္ကသိုလ်တွေမှာရှိနေတာပဲလို့ပြောစရာရှိပါတယ်.. ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သုတေသနက နိုင်ငံတကာမှာလုပ်နေတဲ့သုတေသန၀န်းကျင်ကိုပြောချင်တာပါ.. အဲ့လိုပြောလို့မင်းကနိုင်ငံတကာဝန်းကျင်ဆိုပြီးပြောရအောင်ဘယ်လောက်များနှံ့စပ်လို့လဲလို့မေးနိုင်ပါသေးတယ်.. အိမ်နီးချင်းတစ်နိုင်ငံကိုပဲ တစ်ပါတ်ဆယ်ရက်လောက်ရောက်ဘူးတာပါဗျာ.. ဒါကလဲ သုတေသနလုပ်တာမျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူး..
ဒါပေမယ့် သုတေသနလုပ်နေတဲ့သူတွေ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) ကိုတွေ့တိုင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျိတ်မေးမိတာက ဒီလူတွေဘာပိုက်ဆံနဲ့သုတေသနလုပ်နေကြတာလဲ ဆိုတာပါပဲ..
တကယ်တော့ သုတေသနဆိုတာကိုက သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းပေးနေတာကိုး..
သုတေသနလုပ်နိုင်ရင် အလုပ်ရမယ်.. အလုပ်မြဲဖို့သုတေသနလုပ်ရမယ်..
ဒါကသုတေသန နဲ့ အလုပ်ရဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဝန်းကျင်..
သုတေသနလုပ်ဖို့ ငွေလိုတယ်.. ငွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ငွေပေးချင်လာအောင်လုပ်တဲ့ သုတေသနဖြစ်မှ ငွေရမယ်.. အဲလိုဖြစ်အောင်လဲ စွဲဆောင်နိုင်ရမယ်.. အဲ့အတွက်ဘာသုတေသနလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စပြီးသုတေသနလုပ်ရကော.. ပြသနာတွေအစဆွဲထုတ်ရကော..
ဒီလိုနဲ့သုတေသန၊ အလုပ်၊ ငွေ ဆိုတဲ့ ၀န်းကျင်ကြီးဖြစ်လာကော..
ကဲ..ဆရာရေ.. အဲ့ ၀န်းကျင်မရှိရင်.. ဆရာကောင်းတွေဘယ်လောက်သင်သင် ရာထူးတိုးဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ့်သုတေသနပဲ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါ့..
February 24 at 3:07pm · Like · 1
Ye Ni ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာ မနှစ်က Social Science Research တခု လာလုပ်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတခုက ကျောင်းသူကို ဝန်ကြီးဌာနက "ငါတို့ ဆီက အချက်အလက်တွေ သူများနိုင်ငံ ရောက်သွားမှာ" စိုးတဲ့အတွက် အချက်အလက်မှန်တွေ မပေးဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျောင်းသူရဲ့ စာတမ်း မအောင်ဘူး။
February 24 at 3:21pm · Like · 2
Mdy Boy While we are discussing """သုတေသနဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်မှလုပ်တတ်ကြရဲ့လား ... (Can we do research?)""", please see R&D spending in selected countries.
[The The Wall Street Journal, 2014 Jan 17]
February 24 at 3:32pm · Like
Thiha Kyaw ကျွန်တော်တို့တွေ အခက်အခဲတွေကြီးပြောနေလို့တော့ မပြီးသေးဘူးထင်တယ်နော်။ လုပ်ချင်စိတ်ရှိအောင် လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေများများပေါ်လာအောင် ပြန်လုပ်ယူရဦးမှာပါ။ ကျောင်းတုန်းက ဗန်းစကားနဲ့ပြောရင် စုန်ပြူးတွေထွက်လာဖို့လိုတာပါ။ စုန်းပြူးတွေကပဲ ဘာမှ ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ Research ကို ရအောင်လုပ်ယူသွားတာပဲ။ အခုတော့ ကျောင်းတွေသွားကြည့်၊ စုန်းပြူးရှိဖို့နေနေသာသာ မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ်တွေကများနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သုတေသနဘက်သွားမလဲ။ စူးစမ်းဖို့ နေနေသာသာ လူကြီးမကြိုက်မှာ စိတ်းပူနေရာတာနဲ့ ဘယ်ခရီးမှ မရောက်တော့ဘူး။
February 24 at 3:33pm · Like · 2
Maung Maung Than သစ်တောဌာနရဲ့ သုတေသနနဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အသုံးစရိတ်များ Source Environmental Performance Assessment Report, UNEP
February 24 at 3:39pm · Like · 2
Mdy Boy USD or Myanmar Kyat in [Million] ?
February 24 at 3:47pm · Like
Maung Maung Than မြန်မာကျပ်သန်းပေါင်း
February 24 at 3:49pm · Like · 1
Hana San သုတေသနမှ မလုပ်ရရင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်..it is me .
February 24 at 5:10pm · Like · 1
PaiNg PaiNg ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများသည် research ဟုခေါ်သော ဘာမှန်းမသိတဲ့အရာကြီးကို လုပ်ချင်ကြပါသည် သို့သော်
ဘာကိုလုပ်ရမလဲမသိပါ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတာကို မခွဲခြားနိုင်သေးပါ ဘာ့ကြောင့်လုပ်ရမှာလဲမသိပါ ရလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မသိကြပါ နိုင်ငံခြားကကျောင်းသားတွေ လုပ်နေကြတာကို အားကျတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် လုပ်ချင်စိတ်ရှိကြပါတယ်
February 24 at 5:38pm · Like · 2
Pyi Pyi Thant ဟုတ်ကဲ့ သုတေသနတော့ လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီသုတေသနအတွက် လေ့လာတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေပေးရင် ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ လို့ မေးတဲ့ respondent တွေ၊ ဒီသုတေသနလုပ်ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ရွာကို ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ လို့ မေးတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ရင်၊ သုတေသန လုပ်ဖို့ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ကို မေးတဲ့အခါမှာ မမှန်မကန် ဖြေတာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရရင် တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ သာဆောင့်ပြီး ကျွန်တော်မျိုးမ မှားပါတယ် လို့သာအော်လိုက်ချင်ပါတယ်။
February 24 at 6:40pm · Like · 2
Htay Htay Kyi Tint လုပ်တော့လုပ်နေပါတယ်။ အားမကောင်းသေးလို့ပါ။http://www.youtube.com/watch...
The Village Book represents ActionAid Myanmar's bottom-up approach to community ...See More
February 25 at 12:50pm · Edited · Like · 1
Soe Thura Tun မြန်မာပြည်မှာ သုတေသနကို နိုင်ငံတကာ နဲ့တွဲဖက် လုပ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ တချို့လည်း publish ဖြစ်ပြီး တချို့ကတော့ ထွက်မလာ (သေး)ပါ။ စာရေးသူအနေနဲ့ သူ့ဝန်းကျင် အပေါ် ကြည့်ပြီး မြင်တာလို့ပဲသဘောထားပါတယ်။ တပြည်လုံး တွက်ကြည့်ရင် အား မကောင်းလှဘူးဆိုတာတော့ လက်ခံပါတယ်။ အဖြေ ၁-၂-၃ ကို တော့ စိတ်တိုင်းမကျ၊ အပျင်းပြေ ရေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီထက်ပို လေ့လာ ကြည့်ရင် အဖြေ တစ်ခု ထွက်မှာပါ။
Yesterday at 4:41am · Like · 3
Maung Maung Than အဓိကကတော့ သူ့ ဝန်းကျင်ပါ၊ especially သစ်တောကို ပြောတာပါ၊ သူ့ ဘေးက စိုက်ပျိုးရေး ဒီထက်မက အများကြီးဖြစ်မြောက်နေတာကို လက်ခံပါတယ်
Yesterday at 7:34am · Like · 1
Wei Phyo Oo ရွှေပြည်သားတွေရဲ့ သုတေသနစာတမ်းတွေ international journal publication တွေထဲမှာ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို Web of Science လို နေရာမှာ ရှာကြည့်ရင် လွယ်လွယ်လေး သိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် ပါချုပ်က သူကိုယ်တိုင် ပညာရှင်ဆိုတော့ corresponding author ကိုပဲ စာရင်းသွင်းမှာပါ။ co-author ဆိုရင် count လုပ်မယ်မထင်ပါဘူး။ co-author လောက် ပါရုံအဆင့်ကတော့ သစ်တောက ၅တန်းကျောင်းသားလောက်တောင် ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သစ်တောက လူတွေထဲမှာ corresponding author အဖြစ် နိုင်ငံတကာဂျာနယ် publication ၃-၅စောင်လောက်တော့ ရှိတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ပါချုပ်က ဒီထက်ပိုပြီး ဖြစ်ထွန်းစေချင်တာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ရွှေပြည်မှာ စိုက်ပျိုးရေးကလူတွေက သုတေသနအလုပ်နိုင်ဆုံးပါ။ ကျနော့်အမြင်ပြောရရင်လည်း အဆင့်မီသုတေသနဆိုတာကို နိုင်ငံတကာ အကယ်ဒမစ်ဂျာနယ်တွေမှာ (ယခင်က Journal of Burma Research Society မှာ ဆရာကြီးတွေ ရေးခဲ့ကြပေမယ့်) ရွှေပြည်သားတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် corresponding author အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရေးထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ တိုင်းတာ တာက ပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပါချုပ်က Can we do research? လို့ အဘိယာစကပြုတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by U NU OF BURMA at 2/27/2014 09:29:00 PM0comments Links to this post
အတိုက် အခံ ပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မတီ (People's Democratic Reform committee) (PDRC) ကို နောက်ကွယ်မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် ကုမ္ပဏီနှင့် တသီး ပုဂ္ဂလ ၆၁ နေရာ ရှိကြောင်း သတင်းရှိသည်။
၄င်းတို့အနက်မှ ကုမ္ပဏီ ၁၉ ခု နှင့် တသီး ပုဂ္ဂလ ၁၃ယောက် အမည်ကို အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းအရ သိရသည်များတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လူသုံးကုန် ပစ္စည်း (consumer products) ထုပ်လုပ်ဖြန့်ချီသည့် SAHA PATHANAPIBUL PUB CO LTD ကုမ္ပဏီ၊ ဗန်ကောက်မှာ အထင်ကရ ဖြစ်သော Gaysorn Plaza. ၊ Siam Paragon Department Store ၊ King Power Group ၊ အဆင့်မြင့် ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ နာမည်ကျော် နာမည်ကြီး ဟိုတယ်များ ဖြစ်သည့် Dusit Thani Hotel, Siam Intercontinental Hotel, Riverside Hotel တို့နှင့် Mitr Phol Group, Wangkanai Group, Boon Rawd Brewery Co, Thai Beverage Plc, Yakult (Thailand) Co, Neptune Co, Thai Namthip Co, Muang Thai Life Assurance Co, Hello Bangkok Co and Metro Machinery Group. ဆိုသည့် ထိုင်းစီးပွါးရေးလောကမှ ရှေ့ဆောင် ကုမ္ပဏီများ Chumpol Suksai, Chalerm Yoovidhya, Pramon Suthiwong*, Khunying Kallaya, Nuanphan Lamsam*, Wimolphan Pitathawatcha, Dr Pichet Wiriyachitra, Taya Teepsuwan, Sakchai Guy*, Krisana Mutitanant, Pol Gen Kitti Rattanachaya, Chitpas Kridakorn *, Issara Vongkusolkit ဆိုသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏
အမည်များကို တွေ့ရခြင်းသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒဟု အော်နေသော အတိုက်အခံတို့၏ တောင်းဆိုချက်များတွင် ရှင်န၀ပ်မျိုးဆက် ထိုင်းမှထွက်သွားရန်ဆိုသောအချက် ဘာကြောင့် ပါရသည်ကို အဖြေပေးနေပါသည်။
လက်ရှိတွင် ဘန်ကောက်၌ အတိုက်အခံ များက ဆက်လက် ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြလျက် ရှိသော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ယင်လပ်ကမူ ရွေးကောက်ပွဲ ကို သွေးထွက် သံယိုမှု မရှိဘဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်၍ ကျေနပ် မိကြောင်း ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂ ရက် တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
အားလုံး စောင့် ကြည့်နေခဲ့ကြသော ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် နေ့ ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ က ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ် သော်လည်း
နှစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ကြား တင်းမာ မှုများက ဆက်လက် မြင့်တက် လျက်ရှိပြီး အချိန်ယူ ဖြေရှင်းရမည့်
နိုင်ငံရေး ပြဿနာ တစ်ရပ်အဖြစ် ပွဲဆက်အီနေဦးမည့် ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာ ထိုင်းဘတ်ငွေ တန်ဖိုး ကျလာခြင်းက မီးနီပြနေသည်။
ဒီမိုကရေစီ၏ဂုဏ်သရေခြုံလွာဖြစ်သော နိုင်ငံရေး ရင့်ကျက်မှု အောက်မှာသာ သဘောမတူခြင်း၊ သဘောထား ကွဲလွဲခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ဟာ ဒီမိုကရေစီကျ သည့် နည်းလမ်းများ ဖြင့် အန္တရယ်ကင်းအောင် ထိန်းချုပ်လို့ရပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ မကျ သည့် နည်းလမ်းများ ဖြင့် အာဏာကို လွှဲပြောင်းဖို့ အားထုတ် ကြသောရလဒ်ဆိုးမှာ ထိုင်း နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အကြီး အကျယ် ထိခိုက် နစ်နာ သွားခဲ့သည့်အပြင် နလံထလာတဲ့ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများကြား ဒေသတွင်း စီးပွါးရေး အံတုဖက်ပြိုင်လာချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပွဲမှာ တာဝန်ရှိသူများ (ထင်သာမြင်သာ ၀င်ပါသူများ၊ မတင်သာမမြင်သာတဲ့ ပါဝင်သူများ)၏ မိုက်မဲမှုကို ထိုင်းပြည်သူများ ခံရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိနိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်အကျိုးးကို ကြည့်ပီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးကနေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကိုယူသင့်ပါဘီ။ ဒီအနေအထားမှာ ကိုယ့်အခြေအနေကိုလည်းကိုယ်သိသင့်ပါပြီ။ ယခင်ပိုစ့်တခုတွင်ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရှုံးကာ လွတ်တော်တွင်း တိုက်ပွဲမှာမနိုင်သောကြောင့် လမ်းပေါ်တက်ကာ ကဖျက်ကရက် ပြုရာမှာလည်း ထွက်လာသည့်အဖြေကိုကြည့်။
အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ မဲမပေးရေး နှောင့်ယှက် ဟန့်တားရေးတိုက်ပွဲမှာ ရလဒ်က“အရှုံး”-
မဲပေးခွင့်ရှိသူ ဦး ရေ ၄၈ဒသမ ၇ သန်းရှိသည်။ လုံးဝထိမ်းချုပ်ထားနိုင်သော မဲဆန္ဒနယ်များ အပါအ၀င် မဲမထည့်ရေး အစီအစဉ်အရ မဲ ဆန္ဒရှင် ၁၂သန်းက မဲမပေးခဲ့ပါ။ ၇၅%ကား မဲပေးသွားသည်။
ဗန်ကောက် တွင်မဲရုံ ၆၆၇၁ ရုံရှိ သည့်အနက် မဲရုံများ သို့ မဲစာရွက်များ အချိန်မီ မရောက်ရှိခြင်း၊ အတိုက်အခံ များ၏ ဖိအားပေး မှုကြောင့် မဲရုံများ ပိတ်လိုက်ရခြင်း၊ မဲရုံ ဝန်ထမ်း အရေ အတွက် မလုံလောက်ခြင်းစသည် တို့ကြောင့် မဲရုံ ၅၁၆ ရုံ ပိတ်ခဲ့ရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် မဲ လုံးဝပေးခွင့် မရခဲ့သည့် မဲဆန္ဒ နယ် ၄၂ ခု အချို့ နေရာများတွင်သာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ် ပေးနိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ် ၂၇ ခုရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်လည်ပြီး မဲဆန္ဒပေးမှုကို ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလတ် ရှင်န၀ပ် ဦးဆောင်တဲ့ ယာယီအိမ်စောင့်အစိုးရဟာ အာဏာအကန့်အသတ်နဲ့ နိုင်ငံကို ၂ လခွဲကြာ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုက်ခံတွေက သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒပြမှုကိုလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ရက် တနင်္လာနေ့တုန်းကတော့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တယောက်ကို ရဲက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ Sonthiyarn Cheunruethainaitham အား နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောသည်။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ၁၉ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Tharit Pengdit က ပြောသည်။
Posted by U NU OF BURMA at 2/13/2014 08:49:00 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏ အလိုမပြည့်မှုများ
မနက်ဖန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ...
ကံကြွေးချ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးနှင့် မြောက်ကိုးရီးယာ...